सजिलै अंग्रेजी सिक्ने १२ तरिका – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
सजिलै अंग्रेजी सिक्ने १२ तरिका
तपाई अंग्रेजी फरर बोल्न सिक्ने रहर छ भने अब तपाइले चिन्ता नलिनुस, हामी तपाइको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा छौ । यो मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो र तपाईं यो पूर्ण तरिकाले असहमत पनि हो, तर यदि यसले केहि मान्छे लाई लाभकारी पहुँच गर्दछ त त मलाई खुशी हुनेछ।
साथीहरु हाम्रो देशमा अंग्रेजी बोल्ना जान्न एक धेरै ठूलो व्यवसाय छ। विशेष रूप देखि साना शहरहरुमा यसको केहि अधिक नै क्रेज छ। तपाईंलाई ठाँउठाउँमा अंग्रेजी बोल्न सिकाउने देखि सम्बन्धित विज्ञापन देख्छौ, “९० घन्टामा अंग्रेजी बोल्न सिक्न,”, “फर अंग्रेजी को लागि ।
यदि तपाईं माथि दिए जस्तै कुनै मेरठको मानेको हो त अब उनलाई छुटकारा पाउनुस, र अंग्रेजी बोल्नको लागि तल दिएका सुझावहरु पढ्नुस ।
1. आफ्नो महौल अंग्रेजी बनाउनुहोस्: कुनै पनि भाषा सिक्नमा जो एक चीज सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो छ हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो वातावरण। आखिर हामी आफ्नो मात्र भाषाभाषा सानो सी नै उमेरमा कसरी बोल्न लाग्दछ: – किनभने 24X7 हामी यस्तो वातावरणमा रहन्छौं जहाँ यो भाषा बोल्ने, पढी र सुनी जान्छ। यसैले अंग्रेजी बोलना सिकन छ त हामिलाई यथा संभव हुन सक्छ तपाईंको वातावरण को अंग्रेजी बना दिन चाहिए। यसको लागि तपाईं यस्तो केहि गर्न सक्छन्:
नेपाली पत्रिकाको साटो अंगेजी पढन शुरु गर्नुस्।
नेपाली गीत ठाँउ अंग्रेजी गीत सुन्नुस ।
तपाईंको रुचि अनुसार अंग्रेजी कार्यक्रम / चलचित्रहरु हेर्नुहोस्।
2. मित्र खोज्नुहोस् जो तपाईं नै जस्तै जस्तो अंग्रेजी बोल्न सिक्नु चाहनु हुन्छ। यदि तपाईंको घरमा नै कुनै यस्तो छ । तर यदि छैन भने यस्तो मान्छेलाई जति तपाईंको घरको नजिकै हो उ त्यति राम्रो छ। यस्तो मित्रहरुलाई अधिक देखि अधिक कुरा गर्नुस् र केवल अंग्रेजीमा मात्रै ।
3. कुनै सल्लाहकार बनाउनुहोस्: कुनै यस्तो व्यक्तिलाई तपाईंको सल्लाहकार बनाउनुहोस् जुन राम्रो अंग्रेजी जान्दछन्, तपाईंको कुनै साथी, तपाईंको कुनै नातेदार, कुनै छिमेकी, कुनै अंग्रेजी सिकाउने इन्सिच्युट …। कुनै कुरामा तपाईंको मद्दतको लागि तयार हो। तपाईं आफ्नो मास्टर देखि जति मद्दत लिन सकिन्छ त्यति लिनुस ।
4. पहिले दिनदेखि नै सही अंग्रेजी बोल्न प्रयास नगर्नुहोस्: यदि तपाईं यस्तो गर्नेछन् त तपाईं यो कुरामा उलझे रहइन्छ कि तपाईं सही बोल्दै हुनुहुन्छ वा गलत। पहिलो एक -दु महिना बिना कुनै तनाव को जो मुंह मा आये बोले, यो ना सोचें कि तपाईं व्याकरणीय सही हो या नहीं। आवश्यक छ कि तपाईं धीरे -धीरे आफ्नो झिझक को मिटाएँ।
5. अंग्रेजी सिकन को लागी अलर्ट रहयो: वैसे त म आफ्नो बोली मा अंग्रेजी को श्रेय आफ्नो स्कूल St.Paul को को दि्छ मा अंग्रेजी को लागि आफ्नो सतर्कता को कारण देखि पनि मैले धेरै केहि सीखा छ। म जब टीवी मा कुनै अंग्रेजी कार्यक्रम देखता थियो त ध्यान दि्छ को शब्दों को कसरि उच्चारण गरे जा रहेको छ, र कुनै शब्द को वाक्य मा कसरि प्रयोग गरिरहेको छ। यसको आलावा मैले नयाँ शब्दहरु सिक्न को लागि एक डायरी पनि बनाइयो थियो जसमा म अखबार पढते समय जसको शब्दहरु लाई बुझ्न आउँछ थिए त्यो लेख्छ, र उनको प्रयोग गरेर को एक वाक्य पनि बनता थियो, यो शब्द को अर्थ याद राख्न को लागी सजिलै थियो।
6. बोली गरेर पढ्नुहोस्: हरेक रोज तपाईं एकल या आफ्नो समूह मा तेज आवाज मा अंग्रेजी को कुनै लेख या कहानी पढें। बोली -बल गरेर पढन बाट तपाईंको उच्चारण सही हुनेछ, र बोल्न मा आत्मविश्वास पनि बढेगा।
7. मिरर प्रयोग गर्नुहोस: म अंग्रेजी बोलना त जान्छ तर मेरो भित्र पनि तरलता को कमी थियो, यो ठीक गर्न को लागि म अक्सर अकेले शीशे को सामने खडे हो र अंग्रेजी मा बोला गर्दछ थियो। र अझै पनि यदि मलाई कुनै प्रस्तुति वा साक्षात्कार दिने हुन्छ त म शीशे को सामने एक -दो पल्ट अभ्यास गरेर आफै को तयार गर्दछ हुँ। तपाईं पनि आफ्नो घर मा मौजूद दर्पण को प्रयोग आफ्नो बोली अंग्रेजी मा सुधार गर्न को लागि कीजिये। शीश को सामने बोलने को सबै भन्दा ठूलो लाभ छ कि तपाईं लाई कुनै शंका नहीं हुनेछ र तपाईं आफु को सुधार गरेर पाएंगे।
8. प्रक्रियाको मजा लिनुहोस्: अंग्रेजी बोलना सिकेने को को एक आनंद को जस्तै हेर्नुहोस यो यसलाई आफ्नो लागि बोझ न बनाइन्छ। आराम देखि तपाईंको लागि जो गति सहज हो कि गति देखि अगा बढ बढन। तर यसको यो मतलब छैन कि तपाईं आफ्नो प्रयास को एकदम देखि कम गरौं, बल्कि जब तपाईं यसलाई आनंद गर्नेछन् त आफु -बचद यस दिशा मा तपाईंको प्रयासहरु र पनि बढ जायेंगे। तपाईं यो पनि सोचें कि जब तपाईं तरल बोलने लगेंगे तब कितना राम्रो लगेगा, तपाईं को विश्वास पनि बढ जायेगा र तपाईं सफलता को तरफ बढन लगेंगे।
9। अंग्रेजी मा सोचना सुरु गर्नुहोस्: जब मान्छे मन मा केहि सोचता छ त स्वाभाविक रूप देखि त्यो आफ्नो मात्र भाषा मा नै सोचता छ। तर चूँकि तपाईं अंग्रेजी सिक्न को लागि प्रतिबद्ध हो त तपाईं जो मन मा सोचते हो उसलाई पनि अंग्रेजी मा सोचें। यकीन जान्नुहोस तपाईंको यो सानो -छोटे प्रयासहरु लाई तेरी देखि तपाईंको तल लागे सम्म पंहुचा गर्नेछन्।
10. यस्तो चीजहरू पढ्नुहोस् जुन बुझ्न मा बिलकुल सरल हो: बच्चाहरु को अंग्रेजी हास्यहरु तपाईंको होल्प गर्न सक्छ, यसमा चित्रहरु लाई तपाइँ कथा बुझ्न मा हल्प गर्नेछ र साधारण वाक्य गठन पनि साधारण बोल चाल मा बोले जाने वाला सेन्सेस मा तपाईंको पक बनाइनेछ ।
11. इन्टरनेट को प्रय
२०७४, २० माघ शनिबार १२:५३